Akụkọ - Kụziri gị otu esi ewepu ntu gel site na mbọ gị ndị ọkà mmụta sayensị n'ụlọ ~
Kuziere gi otu esi ewepu ntu gel site na ntu gi na sayensi na ulo ~
M ka na-echeta ihu ọtụtụ ndị na-eme mkpesa banyere afọ ọhụrụ na mbido Afọ Ọhụrụ. N'ihi Covid-19, atụghị m anya na mgbe set nke pajamas, ịkpụcha mbọ aka na ntutu isi nke edoziri maka afọ ọhụrụ niile bụ ihe efu.
N'oge ahụ, Z kasiri onye ọ bụla obi ma ọ bụrụhaala na ha nọ n'ọnọdụ dị mma, ego ahụ egbughị. Ma mgbe otu ọnwa gachara, nsogbu ọhụrụ amalitela: mbọ ahụ toro site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ, na ntu ndị ahụ adịghị mma ma ọ bụrụ na ha nọrọ na ha, ebe a na-emeghe ntu adịghịkwa emeghe. Kedu ihe m ga - eme maka ntu ahụ iji mee gel gel polish?
Mụ nwanyị ndị na-achọkarị imepụta ntu mara na mbọ gel dị iche na mbọ mbọ. Mgbe ị gara ụlọ ahịa iji wepu ya, manicurist ga-emerụ ya nke ọma iji wepụ ya. Nke a bụ n'ihi na elu nke ntu ahụ nwere akara akara, nke na-ahụ maka ntu ahụ. Onye nkụzi ahụ na-etekwa ọnụ ọnụ mbọ aka ahụ na ihe mkpuchi iji mee ka ha dị ogologo.
Anyị na-enweghị ndị ọkachamara sanding igwe n'ụlọ, ma nkịtị sanding akwụkwọ nwekwara dị. Ọ na-atụ aro ka ịhọrọ a rubbing warara na ike frosting ike nke anya polishing. Oge na-egbu oge na - agbanwe agbanwe. Ahụmahụ Z bụ na ọ bụrụhaala na elu anaghị enwu gbaa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị mpempe akwụkwọ n'ụlọ? Nwere ike ịhụ na ọtụtụ ntucha ntu nwere akwa ha na - egbu egbu, mana ụdị ahụ dịtụ warara, na enweghị mkpịsị aka ntu pụrụ iche maka ọrụ dị mfe
Mgbe ahụ malite usoro mwepụ ntu. Uv gel polish abụghị otu ihe ahụ dị ka mbọ mbọ nkịtị. Ọ kachasị mma ịzụta ọkachamara ewepụ ntu ma ọ bụ ngwa ntu. Ugbu a, ọ dịghị mfe ịzụrụ ịzụrụ, fairies na-eme ya na ntanetị.
Enwere ike ịwụpụ ihe nhichapụ ntu n'ime obere iko, wee tinye mkpịsị aka gị maka minit 8-10 wee wepụta ya; arụ ọrụ nke akpa ntu dị mfe karịa, naanị mepee ma kechie mkpịsị aka iri ahụ, ọ na-abụkarị nkeji 15.
Mgbe “baptism” nke ntu mwepụ mbọ, gel polish na-adị nro. N'oge a, jiri nwayọ na-agbanye ọnụ ya ma ọ ga-atụgharị, wee jiri nwayọọ nwayọọ kpoo ya na njedebe na nchara nchara, a ga-ewepụkwa ntu ntu ahụ nke ọma.
Ọ bụrụ na ihe ndị fọdụrụ dị, jiri ahịhịa na-ehicha aja. N'ikpeazụ, echefula ịchacha mmanụ na itinye mmanụ na-edozi ahụ. Ihe na-egbuke egbuke nke ntu zuru oke ewepụrụ adịghị mma na ntakịrị ntakịrị, ọ ga-eji nwayọ gbakee n'ime ụbọchị ole na ole.
Mana n'eziokwu, ịme ka mbọ ahụ dị n'onwe gị dị mfe imerụ ahụ, yabụ Z na-eche na ọ bụrụ na ị na-eme otu agba ma ọ bụ na-agba agba agba (ọ bụghị ụdị nwere ọtụtụ usoro mgbagwoju anya), ndị na-agba mbọ na-agba mbọ n'ụlọ. nwekwara ike ime ka agba agba ha.
Chọta nọmba agba mbọ nke yiri agba ntu ahụ, wee tinye ọkwa ole na ole n'akụkụ nke toro, wee tinye ụfọdụ ntu na-egbuke egbuke na ntu ahụ niile. Mmetụta kwesịrị ịdị mma.
Agbanyeghị, agbanyeghị na ihe dị n'elu dị mfe ma dịkwa mfe ikwu, ọrụ ahụ n'ezie nwere ike ọgaghị adị mma maka ịga ebe a na-agba mbọ, yabụ enwere ụzọ ọzọ iji egbutu mbọ ndị toro eto.
Umengwụ Cancer Z mere mbọ uhie uhie monochromatic n'oge Afọ Ọhụrụ ndị China. Echere m na m ka nwere ike ịhụ ya mgbe m gbusịrị nke atọ. Echere m na enweghị m ike ịpụ ugbu a, yabụ na-eto ma na-eji nwayọ nwayọ. O yighị ka ọ dị mkpa?
Na mkpokọta, ma ndị feli n’onwe ha buuru ha ma ọ bụ chebe idobe ha otu a, kpachara anya ka ị ghara ịtụtụnye ntu! Na mbu, iwepu ntu ntu sayensi anaghị ebibi ntu ahụ, mana ọ bụrụ na ị manye ya, ọ dị mfe imebi akwa ntu ma ọ bụ ọbụna mbufụt.
Ma ọ bụrụ na ọ bụ ịkpụcha mbọ aka dị ka Z n'oge a, ọ nweghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị debe ya ogologo oge, ọ ka na-atụ aro ka ndị na-eme akụkọ na-agbaso ezigbo agwa nke ịkpụchasị oge niile iji zere mkpofu nsị na mbọ, nke na-adịghị mma ahụ ~